Ascorbic acid noma Vitamin C, - omunye organic compounds eyaziwa osetshenziselwa nokwelashwa izifo eziningi. It has ukubaluleka ekhethekile nokwelashwa imikhuhlane, futhi kudingekile ukuze uqinise odongeni semithambo. Namuhla sithola lokho izakhiwo kuyinto ascorbic acid, okuyinto namanje kunikezelwe. Futhi, uthole ukuthi yini imiphumela uma saleli vithamini akwanele emzimbeni womuntu, noma, kunalokho, kukhona ngokweqile.
I izakhiwo enkompolo organic
Iziphi izici ine acid ascorbic? Nalokho akwenzayo umzimba womuntu? Iqiniso liwukuthi kusiza ukulawulwa igazi coagulation, umzimba carbohydrate, izicubu ukuvuselelwa. U-vitamin C libuye likhuthaze nokwanda okukhulu umzimba ozivikela. Ascorbic acid is hhayi kukhiqizwa emzimbeni womuntu, futhi iza kuphela ukudla. Uma umuntu inikwa amandla yi ngokugcwele, ngeke kutivela site of organic compounds.
Ascorbic acid: yini edingekayo?
U-vitamin C kuyadingeka kulezi zimo:
Ukuze ukwelashwa kanye nokuvimbela Hypo-ne beriberi.
Ezinganeni esikhathini sokukhula esebenzayo.
Ngezinye imithwalo ephakeme (kokubili okungokomzimba uhlamvu engqondo).
Iziguli unezinkinga igazi ekunqandeni, odokotela linqume vitamin C
ascorbic acid Kuyasiza wenze umzimba womuntu wakwazi ukumelana ezifweni ezihlukahlukene.
Ukuze nabesifazane abangabafundi abakhuthele sesimweni ezithakazelisayo, kanye ngesikhathi ukuncelisa ingane.
Nge ukukhathala, agcizelele uthi.
Ascorbic acid: mathupha. Tablets kwezokuphatha ngomlomo
Uyini lika-vitamin C adingwa umzimba womuntu, ukuze kwakungekho ngokweqile noma ukushoda enkompolo organic?
Nokuvinjelwa udokotela ebekiwe ascorbic acid e izibhebhe isamba:
- Adult - 0.05-0.1 g (elihambisana 1-2 amaphilisi) ngelanga.
- Ukuze izingane ezineminyaka engu-5 ubudala - 1 ithebhulethi ngosuku.
Ukuze ekwelapheni ochwepheshe setha umthamo vitamin C:
- Abadala - 1-2 amaphilisi izikhathi 3-5 ngosuku.
- Izingane kusukela eminyakeni emi-5 - 1 ithebhulethi izikhathi 2-3 ngosuku.
amaphilisi ascorbic acid kungabuye zaphathwa abesifazane endaweni kanye nokuncelisa mums. Odokotela enqunyiwe kulesi sigaba sama-abantu 6 amaphilisi usuku esikhathini esiyizinsuku ezingu-10, bese amaphilisi 2 ngosuku.
Manje kuyacaca kangakanani ascorbic acid kuyadingeka izingane kanye nabantu abadala ngenxa prophylaxis kanye nokwelashwa. Ngaphezu kwalokho ukucacisa izici ukusetshenziswa lika-vitamin C ithebhulethi:
- Okumele kuqashelwe kudingekile ukusebenzisa amaphilisi abantu abanezinkinga izinso.
- Uma umuntu ezinso, umthamo nsuku zonke saleli vithamini kumele singeqi 1 g
- Iziguli kufanele emzimbeni kukhona yensimbi okuqukethwe okusezingeni eliphezulu, kubalulekile ukusebenzisa izidakamizwa ngemithamo emincane.
- One-time amaphilisi reception ane-alikhali ukuphuza kunciphisa ukumuncwa Vitamin C, ascorbic acid, Nokho-ke akudingekile ukugeza phansi lamanzi esiphethu.
- Kuyinto engenakwenzeka linqume izidakamizwa ebulilini kubantu abangenawo igazi ekunqandeni anda.
- reception isikhathi eside ka-vitamin C kuyadingeka ukulawula umsebenzi izinso, amanyikwe, futhi ukuqapha ezingeni wegazi.
- Izibhebhe akufanele baphuze abantu abangenawo ukuvuvukala ezindongeni emithanjeni ukuvaleka kwabo okwengeziwe.
Imiphumela ukuntuleka vitamin C
Ngisho ukwehla okuncane izinga ascorbic acid kungaba nomthelela endleleni abantu uyozizwa ukukhathala, ukukhathala, engeke abe nenhliziyo emnyama, kuzoba umongozima. Ngoba ulwelwesi lwama-capillary babe ethambile, a nemihuzuko umuntu zingase zimiswe masinyane - ngisho noma nje ukuchofoza isikhumba.
Ukuntuleka ephelele ascorbic acid emzimbeni kuholela yokuthi isiguli isifo ukhwekhwe. Lena isifo esiyingozi kakhulu, ephelezelwa ukuvuvukala izinsini, ukopha yabo futhi soreness. Ngenxa yalokhu, balahlekelwa ikhono ubambe izimpande amazinyo. Kanti futhi, abantu maduze angabonwa ukopha yezitho zangaphakathi.
Imiphumela ngokweqile Vitamin C
I ngokweqile ascorbic acid esikhulu ngoba kungaholela izimpawu ezingemnandi ezifana:
- uzizwa ashisayo;
- ukwanda wegazi.
Nge enkulu ekuqondeni mantombazane sesimweni ezithakazelisayo, kufanele athathe vitamin C odingekayo ngosuku ascorbic acid ezingapheli zingayilimaza impilo yabo. It kuvela ukuthi babutha enkompolo organic kowesifazane kungenzeka ngisho isisu.
Wena ubuye abakwazi kabi lokhu Vitamin futhi ngoba abantu abangalwenza yakha amatshe e izinso aqale ukwandisa amazinga kashukela egazini.
Ngayiphi imikhiqizo kakhulu uvithamini C?
Ascorbic acid itholakala izithelo eziningi kanye nemifino: endaweni pepper amnandi obomvu, black currant, fennel, isipinashi, anyanisi, iklabishi, i-parsley, Sorrel, ulwandle lalesi sihlahla, ikiwi, ulamula, amawolintshi.
Iningi Vitamin C itholakala inja ezomile rose (100 g ngesithombo has 1200 mg lokhu kwakwakhe organic).
Manje ngoba sewuyazi ukuthi bangasibonisa ngasiphi isenzo has emzimbeni, ascorbic acid, okuyiwona wona lapho zidingeka, futhi kwaba namiphi imiphumela kungabangela reception engalawuliwe. Sithole ukuthi kungakanani kufanele uphuze amaphilisi Vitamin C, funa kube khona overabundance of organic compounds, futhi-ke, elafika yi.
Salvia officinalis - isicelo ayiveli usuku namuhla.
"Tridzheks" (amavithamini): ukubuyekezwa, izincazelo, kanye yokusetshenziswa
Ngingayaphi ngisuka ngombuzo: "Ngubani oke ikheli lasekhaya yami ..."
Umklamo Manicure futhi: pink izipikili - isiFulentshi, izeluleko ukubhalisa
Ukumamatheka kuka Fortune kusukela "Chanel Chance"